» को पुग्छ उत्कृष्ट ४ मा ?
को पुग्छ उत्कृष्ट ४ मा ?
२० मंसिर २०७७, शनिबार १९:५५
मकवानपुर, २० मंसिर । विश्व प्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’मा यो साता उत्कृष्ट ४ प्रतियोगीहरु छानिदैछन् । यो साताको शुक्रबार र शनिबारको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरुले दिने मत र दर्शक भोटका आधारमा उनीहरुको नतिजा निकालिनेछ । शुक्रबार प्रस्तुत भएको प्रस्तुतिका आधारमा हेर्ने हो भने सुबिजु जोडी, आमोद जोडी र बुद्धिका जोडी सर्वाधिक सुरक्षित जोडीका रुपमा देखिएका छन् । यी तिनै जोडीले शुक्रबार समान २९–२९ अंक प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै प्रियम जोडीले २६ र ज्योतिला जोडीले २५ अंक प्राप्त गरेका छन् । शुक्रबारको निर्णायक मतका आधारमा ज्योतिला जोडी पून खतरामा परेको छ । गत साता पनि ज्योतिाला जोडीलाई निर्णायकबाट कम अंक प्राप्त भएको थियो । तर नतिाजमा शनिबारको निर्णायक मत र दर्शकको भोट पनि समावेश हुने भएकोले ज्योतिला जोडीलाई समस्या नपर्न पनि सक्छ । किनभने उनीहरुलाई दर्शकले धेरै रुचाएर भोट गरिरहेका छन् । त्यस्तै हालसम्मको बटम लाईनका आधारमा बुद्धिका जोडी र आमोद जोडी खतरामा छन् । उनीहरुले समान ३–३ पटक बटम लाईनको सामना गरिसकेका छन् । ज्योतिला जोडीले २ पटक र सुबिजु तथा प्रियम जोडीले १–१ पटक मात्र बटम लाईनको सामना गरेका छन् । अवार्डका हिसाबमा हेर्ने हो भने बुद्धिका जोडी अगाडि छ । यो जोडीले २ पटक अवार्ड जितेको छ भने प्रियम जोडीबाहेक अन्य जोडीले १–१ वटा अवार्ड जितेका छन् । तपाईको विचारमा यी जोडीहरुमध्ये उत्कृष्ट ४ मा कुन जोडी पुग्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु पार्कीको जोडीले शुक्रबार २९ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले शुक्रबार कोरियोग्राफर सञ्जय लामासँग मिलेर हिपहप डान्स गरेका थिए । स्टेजमा सुबिजु नामले परिचित यो जोडीले दोस्रो हप्ता पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका पहिलो वाईल्ड कार्ड जोडी कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलको जोडीले शुक्रबार २६ अंक प्राप्त गरेका थिए । स्टेजमा प्रियम जोडीका नामले परिचित उनीहरुले शुक्रबार कोरियोग्राफर युमी बलामीसँग मिलेर ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका चर्चित जोडी गायिका ज्योति मगर र कोरियोग्राफर लाउरे सिंहको जोडीले शुक्रबार २५ अंक प्राप्त गरेका थिए । ज्योतिला जोडीले शुक्रबार कोरियोग्राफर सुनिल बिकसँग मिलेर ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले छैटौँ हप्तामा पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए ।
त्यस्तै फुलन्देकी आमाका नामले चर्चामा आएका हाँस्य कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडीले शुक्रबार २९ अंक प्राप्त गरेका थिए । स्टेजमा आमोद जोडीका नामले परिचित उनीहरुले शुक्रबार ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले शुक्रबार कोरियोग्राफर रोशन विश्वकर्मासँग मिलेर प्रस्तुति दिएका थिए । यो जोडीले तेस्रो हप्ता पर्फाेमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरुको जोडीहरुमध्ये सर्वाधिक केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको जोडी चर्चामा छ । स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडीले शुक्रबार २९ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार कोरियोग्राफर स्वयत्ना योञ्जनसँग मिलेर सेमिक्लासिकल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले नवौँ हप्ताको पहिलो दिन र एघारौँ हप्ताको पहिलो दिन गरी जम्मा २ पटक पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका छन् ।